Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chivabvu 27, 2021
Chikoro cheBondolfi Teachers College chinovharwa kuMasvingo zvichitevera kuputika kwechirwere cheCovid-19 nezuro pachikoro ichi icho chakabata vadzidzi nevarairidzi vakawanda, uye vamwe vachitarisirwa kubatwa nacho muongororo yechimbi chimbi iri kuitwa nehurumende.
Vanhu zana negumi nevatatu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro munyika yose, uye vanhu vaviri vakafa nechirwere ichi nezuro wakare.
Vatungamiri venyika dziri muSADC Troika vari kuMaputo, Mozambique, kumusangano wechimbi chimbi weDouble Troika vachironga nzira dzekupedza hondo iri kuitika mudunhu reCabo Delagado kuMozambique kwakare.
Vanopikisa pamwe nevemasangano anoita nezvesarudzo vakazvimirira vanoti sarudzo dzichaitwa muna 2023 dzichaita zvakare mutauro nekuti mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, havasi kuratidza chido chekuvandudza maitirwo esarudzo munyika kunyange hazvo vakavimbisa kuita izvi pavakapinda panyanga
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira, Jeffrey Moyo, achamiswa pamberi pedare kuBulawayo mangwana achipomerwa mhosva yekutyora mitemo yekupinda nekubuda munyika mushure mekupomerwa mhosva yekubatsira vamwe vatori venhau veNew York Times kupinda munyika.
Moto unotyisa unoparadza chivakwa chepaMpilo hospital muBulawayo chinonzi chinogara vashandi vezvehutano ndokuparadza midziyo yevagari ava inodarika zviuru mazana mashanu zvemadhora ekuAmerica.
Vakuru vezvikoro nevatevedzeri vavo vanoparura sangano ravo idzva uye riri rekutanga munyika rinonzi Zimbabwe National Union of School Heads.
Varimi vari vemudunhu reMatabeleland South vari kukuridzirwa nenyanzvi dzesangano rakazvimirira kurima zvirimwa zvaishandiswa zvakanyanya manyakare sezvo zvirimwa izvi zvichibatsira kuvaka hutano hwakanaka hwemunhu anodya zvirimwa izvi.
Muchirongwa cheWomen’s RoundTable na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi muhupenyu hwavo.
United Nations Yotumira Nhumwa Yakakosha Kunoona Kukanganiswa kweKodzero dzeVanhu neZvirango muZimbabwe